Mccb Umzi mveliso | China Mccb abavelisi kunye nabaxhasi
JVM1LE (CM1LE) Ityala leMeko eliBunjiweyo
I-VM1LE (CM1LE) Ityala eliBunjiweyo leSekethe
I-JVM1LE uthotho lwamatyala abunjiweyo wesekethe kunye nemveliso eseleyo ngoku. Ikaliwe ukugquma
Umbane ngu-800V. Isebenza kwisekethe ye-AC 50Hz, elinganisiweyo yokusebenza kwevolthi engu-400V kunye nokulinganisa ukusebenza ngoku ukuya kuthi ga kwi-630V, kukutshintsha rhoqo kunye nokuqala okungapheliyo kwemoto. Ngokulayisha ngaphezulu, ukujikeleza okufutshane kunye nemveliso engaphantsi kwamandla ombane, inokukhusela iisekethi kunye nezixhobo zonikezelo lwamandla kumonakalo, zinokusetyenziselwa ukuvelisa kumonakalo kunye nayiphi na ingozi yomlilo enokubangelwa sisiphoso somhlaba esele sikhona esingafumanekiyo ngaphezulu- imveliso yangoku. Ixabiso lentsalela ekhoyo ngoku linokukhethwa.
Umsebenzi fuse kukukhusela yangoku. I-fuse yenziwe ngokunyibilika kunye netyhubhu yefuse, edityaniswe kuthotho njengomqhubi wesinyithi kwisekethe. Xa okwangoku kungaphezulu kwexabiso elithile, i-fuse izakuvelisa ubushushu bunyibilike inyibilike, ngaloo ndlela wophule okwangoku kwaye ufezekise umphumo wokhuseleko. Iifyuzi zisetyenziswa ngokubanzi kwizixhobo ezahlukeneyo zombane nezombane ngenxa yesakhiwo esilula kunye nokusetyenziswa okufanelekileyo.
I-JVA5 AEG (E93) 1P / 2P / 3P
I-JVA5 Series ineesekethe eziphezulu ezibuthathaka kunye nokukhutshelwa ngaphezulu, kwaye ilungele iinkqubo zokuhambisa amandla kwimizi-mveliso, amashishini nakwizakhiwo zokuhlala, kwaye ikhusela izixhobo zamandla ezifanayo. Imodeli yokusebenziseka inezibonelelo zokuqhekeka ngamandla, amandla amakhulu, ubuntununtunu obuphezulu, ukuthembeka okuhle, ubomi obude benkonzo, ukubuyisela endaweni efanelekileyo, njl njl. Isekethe ye-440V kugqithiso kunye nokukhuselwa okufutshane. Kwangelo xesha, zikwasetyenziselwa ukutshintsha utshintsho phantsi kweemeko eziqhelekileyo. Imveliso iyilelwe kwaye yenziwa ngokwe-IEC 60898 kunye ne-IEC 60947 imigangatho.